ဘာ့ကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ကြပါသလဲ။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်က အသင်းသားများအပေါ် အဆင့် သတ်မှတ်ပုံလေးတွေကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုအဆင့်သတ်မှတ်ရတာလဲဆိုတော့ အသင်းသားရဲ့ ဖိုရမ်မှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုချင်တာ ဖြစ်သလို အသင်းသားများဟာလည်း မိမိတို့ဟာ ယခင်ကထက် အသိပညာများ ပိုမိုများပြားလာပြီဆိုတာကို သိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Reply ဖြစ်စေ ၊ Topic ဖြစ်စေ အားလုံးကို post အဖြစ်နဲ့ပဲ တွက်ချက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းသားများအနေနဲ့ ဖိုရမ်မှ Topic များကိုဖတ်ရှုပြီးပါက ပြန်လည်မဆွေးနွေးနိုင်သေးစေကာမူ အနည်းဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတာလေးလောက်တော့ Reply လုပ်ခဲ့ရင်သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုရင် သူဖတ်ခဲ့တဲ့ Topic ကိုရေးတဲ့သူဟာ သူ့ကို ဒီလိုဖတ်ရှုသူတွေဆီက တုန့်ပြန်သံလေးတွေမြင်ရတော့ ကြည်နူးစေပါတယ်။ သူတတ်ထားသမျှကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေတဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အသိပညာတိုးဖို့ လမ်းစကြီးပါပဲ။ အဲလိုလူမျိုးများစွာ ဖြစ်တည်လာခဲ့ရင် ကျနော်တို့ဖိုရမ်ကြီးဟာ တကယ့်အဖိုးတန်နေရာတခု ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျေးဇူးတင်စကားလေးတော့ ပြောစေချင်ပါတယ်။ ဒါကသတ်မှတ်ချက် မဟုတ်ပါခင်ဗျား။ အကြံပေးမှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားကိုမှန်ကန်တယ် ၊ ဖြစ်သင့်တယ်ယူဆရင်တော့ ကျွန်တော်အကြံပေးသလို လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ပြန်လှန်ဆွေးနွေးနိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါမှ ဖိုရမ်က ပိုအသက်ဝင်မှာပါ။ တင်ပြသူတွေက တင်ပြတာကို ဖတ်ရှုသူတွေက ဒါကတော့ ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ၊ ဒီလိုမရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မေးခွန်းများ ၊ ဆွေးနွေးမှုများနဲ့ လာရောက်လည်ပတ်မှုကို တန်ဖိုးရှိစေချင်ပါတယ်။ ပညာတိုးပွားစေချင်ပါတယ်။
Last edited by Aung Aung; 30-04-2008 at 03:55 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 118 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုခိုင်ကြီး, ကိုဂျိန်း, ကိုရဲလင်းထွန်း, ကိုမြင့်, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုသဝေထိုး, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, ခရာ, ချမ်းမြေ့ ကျော်, စိုးမင်းသူမောင်, စွမ်းကမ္ဘာ, စနိုးလေး, ဆန်းမောင်, ဇာနည်စိုး, တက်တူး, တင်မောင်ဦး, တာတာ, တီဘွား, နန်းရှင်, ပျိုး, ဖယောင်း, ဘုန်းထွဋ်ကျော်, မိုးလွင်, မျိုးမင်းနိုင်, ယွန်းယွန်း, ရန်မျိုးအောင်, ဝင်းအောင်, သူရကျော်ထားဝယ်, သံယောဇဉ်ခိုင်, ဟန်ဇော်, ဟန်ဇော်ထက်, ဟိန်းသူအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဥိးသူရ, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, တောဂေါ်လီ, နေမျိုးဝင်း, နောင် နောင်, မေဦးမွန်, မောင်မဲညို, မောင်မောင်မင်းအောင်, မေလေး, မွေဖု, မှော်ပင်လယ်, အောင်ကိုကိုပိုင်, အောင်ကျော်လင်း, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးဇေ, ၀တုတ်ပေါ, ၀တ်မှုံ, ကြက်ရိုး, ကြယ်စင်စိုး, ပြာသို, ဖြိုးကောင်းကင်, မြန်အောင်သား, နိုးတူး, 12Digits, akm, Aung Aung, Aung Kyaw Thet, Aung Naing Win, aungnaingsint, bagothar85, bonge, cအောင်ကျော်မိုး, devilnight, dusk, Empathlover, G-Dragon, g00gle, green leaf, Hla Myo Thein, htoo war, jay jay, kaung kin lu, ko myo, kokhing, kokohnin84, kokyawzinmin, Kyaw Zin Hein, KznT, lamin.pzl, lay pyay nyin, maJunior, Mg Kyaw Zin Hein, minthumon, moe san dar, moekyal, moemama2008, mr.kohtun, myatmonhtwe, nainglynn, nyeinsaeya86, Nyi Nyi Zaw, ORange & ROse, pannuko, phoetharlay, prizewhite, psaungsku, putty, pyaephyoaung947, saiyemon, shinlay, sweetylemon7, tapotawe, thureinsoe, Venom, waterpeople, Win Htay Lwin, yelinoo, yemyatlin, zawyethan, zin ko phyoe, zin min aung, zinnaing, zo
ခု အဆင့်လေးတွေအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်။ Little Baby (မွေးကင်းစကလေး ) ဆိုတာကတော့ ခုမှ ဖိုရမ်မှာ စ၀င်ရောက်သူလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဘာမှမတတ်သူလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
Toddler (လမ်းလျှောက်တတ်စ )ဆိုတာကတော့ နည်းနည်း သက်တမ်းရှိလာတဲ့ အသင်းဝင်ပေါ့။ ပိုစ့် ၅ ခုပြည့်တာနဲ့ ဒီအဆင့်ကိုစရပါမယ်။ Kiddie (ကလေးပေါက်စ ) ဆိုတာကတော့ အတန်အသင့်သက်တမ်းရှိနေတဲ့ အသင်းဝင်ပေါ့။
ပိုစ့် ၂၀ ပြည့်တာနဲ့ ဒီအဆင့်ကိုရရှိပါတယ်။ Teenager (ဆယ်ကျော်သက် ) က ပိုစ့် ၅၀ ပြည့်ရင် စရတဲ့ အသင်းဝင်ပါ။
Adolescent (ကြီးကောင်ဝင်စ ) ဆိုတဲ့အသင်းဝင်အဆင့်ကိုတော့ ပိုစ့် ၈၀ ပြည့်တဲ့အချိန်မှ စတင်ရရှိပါမယ်။
Grown up Punk (အရွယ်ရောက်သူ ) ဆိုတာကတော့ ပိုစ့် ၁၄၀ ပြည်.တဲ.အချိန်မှာ ရရှိလာမယ့်အဆင့်ပါ။ မိတ်ဆွေတို.က ဖိုရမ်က အကြောင်းအရာတွေကိုသေချာသာဖတ်ကြပါ။ အဆင့်မြင့်လာတာနဲ.အမျှ မိတ်ဆွေတို့ ယခင်ကထက် ပိုမိုသိမြင်နားလည်လာတာကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် သိလာပါလိမ့်မယ်။
Self-confident Adult (ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းရှိပြီးသူ ) ကတော့ ပိုစ့် ၂၀၀ ပြည့်ရင် ရရှိမှာပါ။ Wise Old Person (ပညာရှိကြီး ) ဆိုတဲ့အဆင့်ကို ပိုစ့် ၃၅၀ ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ရရှိပါတယ်။ ဒီအဆင့်လောက်ကို ရောက်လာတဲ့သူတွေဟာ ကျွန်တော်ပြောသလို ဖိုရမ်ကိုသာသေချာဖတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တကယ်ထိပ်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ Ancient Philosopher (ထိပ်တန်းပညာရှင် ) အဖြစ်ကို ပိုစ့် ၆၀၀ ရောက်ရင် ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလူတွေဟာ တကယ့်ကိုလေးစားသင့်တဲ့သူတွေဖြစ်နေပါပြီ။ Guru ဘ၀ကို ပိုစ့် ၁၀၀၀ ပြည်.တဲ.အချိန်မှာရပါမယ်။
အသင်းသားများအား အဆင့် သတ်မှတ်ပုံကို ရှင်းလင်းမှုပြည့်စုံပါပြီ။
Last edited by tu tu; 22-06-2009 at 01:26 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 115 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုခိုင်ကြီး, ကိုဂျိန်း, ကိုရဲလင်းထွန်း, ကိုသီလ, ကိုမြင့်, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုဖြိုးလေး, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, ခရာ, ချမ်းမြေ့ ကျော်, ငါးကြော်, စိုးမင်းသူမောင်, စမောလေး, စွမ်းကမ္ဘာ, စနိုးလေး, ဆန်းမောင်, ဇာနည်စိုး, ညီစေမင်း, တက်တူး, တင်မောင်ဦး, တာတာ, နန်းရှင်, ဖယောင်း, မျိုးမင်းနိုင်, ယွန်းယွန်း, ရန်မျိုးအောင်, ဝင်းအောင်, ဟန်ဇော်, ဟန်ဇော်ထက်, ဟိန်းသူအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ကျော်ထက်ချိန်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမျိုးဝင်း, နောင် နောင်, မောင်မင်းညို (ရွှေဘို), မောင်မဲညို, မောင်မောင်မင်းအောင်, မေလေး, အောင်မိုးထွန်း, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးဇေ, ၀တုတ်ပေါ, ၀တ်မှုံ, ကြက်ရိုး, ကြယ်စင်စိုး, ပြာသို, ဖြိုးကောင်းကင်, နိုးတူး, 12Digits, akm, Aung Aung, aungnaingsint, ayegyi078, AZM, cအောင်ကျော်မိုး, chitnyimalay, devilnight, dusk, Emc Arkar, Empathlover, G-Dragon, g00gle, GOLDENHOPE007, green leaf, hope4future, jester, kaung kin lu, Khin Than, ko lin, kokohnin84, kooo333, Kyaw Zin Hein, KznT, lamin.pzl, lu soe, maJunior, Mandalarthar, Mg Kyaw Zin Hein, mg nge, minthumon, moe san dar, moekyal, moemama2008, MoonLay, mr.vampire, myatmonhtwe, myolay2015, nyeinsaeya86, Nyi Nyi Zaw, pannuko, phoetharlay, prizewhite, psaungsku, putty, pyaephyoaung947, shinlay, supercool, thureinsoe, tu tu, Venom, wahgyi, waterpeople, Win Htay Lwin, yeagae, yelinoo, yemyatlin, zawyethan, zin ko phyoe, zin min aung, zinnaing, zo
25-03-2007, 12:55 AM
ပို့စ်2ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Re: Why we define ranks to members ?
thz for your explaination
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ komyo81 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, Empathlover, tunlinaungt456, zo
Find More Posts by komyo81
25-03-2007, 12:57 AM
ဂုရုကြီးအဆင့်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော် ..
တော်တော်ကို အသိပညာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေမှဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဗျာ ..
အင်းလေ ..ကျွန်တော်တို့အဖို့တော့ Wise Old Person ဆိုတာမျိုးရောက်ဖို့
တော်တော်ကို ကြိုးစားယူရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ ..လေ့လာရဦးမယ်ဗျိုး .. :)
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ဖယောင်း, ယွန်းယွန်း, ဝင်းအောင်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, dusk, Empathlover, minthumon, moe san dar, moemama2008, phoetharlay, thureinsoe, Win Htay Lwin, zin min aung, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ sweet_wine© အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moemama2008, Win Htay Lwin, zin min aung, zo
25-03-2007, 04:43 AM
x-( ကြိုးစားတဲ့သူကလည်း အထူးအသင်းဝင်ရလဲပီးရော ပေါ်ကိုမလာတော့ဘူး။ အမြင်ကတ်နေပီနော်။ ကိုရဲနောင်တောင် ညည်းနေတယ်။ ဟင်း။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ sweet_wine© အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, minthumon, moemama2008, Win Htay Lwin, zin min aung, zo
Your Avatar !
တင်ထားတဲ့ avatar ကလဲဆိုးလိုက်တာ။ပုံကြီးက ဘာပုံကြီးလဲ။ ရှူနာရှိုက်ကုန်း ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ဟီဟီ။
25-03-2007, 04:45 AM
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ sweet_wine© အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moemama2008, Win Htay Lwin, zo
25-03-2007, 04:46 AM
thu doe2yort htal pyaw nay kya dal.:)
25-03-2007, 04:47 AM
ပို့စ် 37 ခုအတွက် 78 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အင်းပါဗျာသိရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ဖိုရမ်မှာက ရေးတဲ့သူ သိပ်မရှိသလိုပဲနော်..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ msoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by msoe
ပို့စ်4ခုအတွက် 11 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
wowww.. What'sanice ranking.. :D
I realli interested in discussing and writing forums.
Thanks4inviting me. :)
cool and nice forum.
But I dont hv Myanmar Font. What should I do?
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Question အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moemama2008, zo
လွယ်ပါတယ်။ ? မသိမဖြစ် ? ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍအောက်မှာ " How can you see myanmar font from our forum " ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီက Alpha Zawgyi unicode ကိုဒေါင်းလုဒ်ချလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာပေါ်တင်လိုက်ပေါ့။ ဒါဆိုပြန်ရိုက်လို့ရပါပြီ....နော်။ :)
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ဖယောင်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, dusk, moemama2008, Win Htay Lwin, zin min aung, zo
25-03-2007, 04:49 AM
မသိလို လျှောက် add ထားမိတာ စိတ်ဆိုးပါနဲ့ နော်..အစ်ကိုကြီးတို့ အစ်မကြီးတို့ ..အလုပ်ပေးသလိုဖြစ်သွားရင်။ဘွားတေး..ဘွားတေး..အာဘွား
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moemama2008, Win Htay Lwin, zo
18-05-2007, 11:37 AM
Originally Posted by Ye` Naung
ဘာကြောင့်ဒီလိုအဆင့်သတ်မှတ်ရတာလဲဆိုတော့ အသင်းသားရဲ. ဖိုရမ်မှာ တက်ကြွစွာပါဝင်
ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု ချင်တာဖြစ်သလို အသင်းသားများဟာလည်းမိမိတို့ဟာ ယခင်ကထက် အသိပညာများပိုမိုများပြားလာပြီဆိုတာကို
သိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Reply ဖြစ်စေ ၊ Topic ဖြစ်စေ အားလုံးကို post အဖြစ်နဲ့ပဲ တွက်ချက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းသားများအနေနဲ့ ဖိုရမ်မှ Topic များကိုဖတ်ရှုပြီး
ပါက ပြန်လည်မဆွေးနွေးနိုင်သေးစေကာမူ အနည်းဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတာလေးလောက်တော့ Reply လုပ်ခဲ့ရင်သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲဆိုရင် သူဖတ်ခဲ့တဲ့ Topic ကိုရေးတဲ့သူဟာ သူ့ကို ဒီလိုဖတ်ရှုသူတွေဆီက တုန့်ပြန်သံလေးတွေမြင်ရတော့ ကြည်နူးစေပါတယ်။ သူတတ်ထားသမျှကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေတဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အသိပညာတိုးဖို့ လမ်းစကြီးပါပဲ။ အဲလိုလူမျိုးများစွာ ဖြစ်တည်လာခဲ့ရင်ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ကြီးဟာတကယ့်အဖိုးတန်နေရာတခုဖြစ်
လာတော့မှာပါ။ဒါ့ကြောင့် ကျေးဇူးတင်စကားလေးတော့ ပြောစေချင်ပါတယ်။ဒါက သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါခင်ဗျား။အကြံပေးမှုသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ. စကားကိုမှန်ကန်တယ် ၊ ဖြစ်သင့်တယ်ယူဆရင်တော့ ကျွန်တော်အကြံပေးသလို လုပ်စေချင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ပြန်လှန်ဆွေးနွေးနိုင်ကြရင်
အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါမှ ဖိုရမ်က ပိုအသက်ဝင်မှာပါ။ တင်ပြသူတွေက တင်ပြတာကို ဖတ်ရှုသူတွေက ဒါကတော့ ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ၊ ဒီလိုမရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မေးခွန်းများ ၊ ဆွေးနွေးမှုများနဲ့ လာရောက်လည်ပတ်မှုကို တန်ဖိုးရှိစေချင်ပါတယ်။ ပညာတိုးပွားစေချင်ပါတယ်။
Thanks for ur explanation...I will try to post as many as I can
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moe san dar, moemama2008, Win Htay Lwin, zo
ကို SnT ...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလိုလေးရိုက်ပေးပါလားဗျာ..ဒီအကြောင်းတွေကို ...ဖိုရမ် Admin ကလည်း ပြောထားပါတယ်.....နဲနဲကြိုးစားကြည့်ပေးပါဦး..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ Nalthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moe san dar, moemama2008, zo
18-05-2007, 05:34 PM
Originally Posted by Nalthar
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေပါသည်။ အခုရေးတာ ဘယ်လိုနေလဲ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, နန်းရှင်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moemama2008, zo
အရမ်းမိုက်တယ်ဟေ့။ ညီကော... ကိုယ့်စာကို မြန်မာလိုမြင်ရတာ မကောင်းဘူးလားကွာ။ ဒီလိုမျိုး သေသေသပ်သပ်မြင်နိုင်၊ လွယ်လွယ်ကူကူ ရေးနိုင်အောင် အားစိုက်ထားရသူတွေလည်း ၀မ်းသာရတာပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, နန်းရှင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, dusk, moe san dar, moemama2008, zin min aung, zo
18-05-2007, 09:26 PM
Very Good ပေါ့ညီလေးရာ ။ သိပ်ကောင်းတယ်။ မြန်မာစာကို မြန်မာတိုင်းရိုက်တတ်သင့်တာပေါ့။ အခြားနိုင်ငံသားတွေလည်း ဒီလိုပဲ ရိုက်ကြတာပဲ သူတို့ဘာသာ နဲ့ရိုက်ကြတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက တရားဝင် ယူနီကုတ်ကို Microsoft မှာ မသွင်းနိုင်သေးပေမယ့် အကိုတို့က ကိုယ့်ဘာသာကို မြတ်နိုးသင့်တယ်ထင်တာပဲ။ ခုလို ညီလေးက ဂရုတစိုက် ပြုပြင်ကြည့်တော့ ၀မ်းသာတယ်။ အားလုံးက ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေပဲပေါ့။ ညီလေးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အားရကျေနပ်မိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, မျိုးမင်းနိုင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နိုးတူး, dusk, ko myo, moe san dar, moemama2008, Win Htay Lwin, yelinoo, zin min aung, zo
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါမယ် posts တွေကိုလဲတင်နိုင်တလောက်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေလေး, မျိုးမင်းနိုင်, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, moe san dar, moemama2008, Win Htay Lwin, zin min aung, zo
အဆင့်ဆိုတာ တချို့နေရာတွေမှာ ခွဲကိုခွဲမှရမှာမို့ ဒါဟာ သဘာဝကျ တဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ . .တကယ်တမ်းပညာကိုလိုလားတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေက အဓိကမဟုတ်တော့ပါဘူး . . ပညာသာအဓိကဖြစ်လာတာပါ . . ပညာလေ့လာလိုက်စားရင်းပြည့်ဝလာတော့ အဆင့်လည်းအလိုလိုမြင့်လာတာ သဘာဝပါပဲ . .
ညီအကိုမောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းကြပါစေဗျာ. .
အောက်ပါအသင်းဝင် 22 ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကျော်စိုးမိုးလွင်, ခင်မျိုးစစ်, ခင်မေလေး, တက်တူး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မေဦးမွန်, နိုးတူး, Aung Aung, dusk, kaung kin lu, maJunior, minthumon, moe san dar, moemama2008, sweetylemon7, tu tu, Win Htay Lwin, yelinoo, yemyatlin, zin min aung, zo
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 10:18 AM